Maraoka : Ilay lahatsoratra nampiditra am-ponja an’i Mohammed Erraji · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2019 5:59 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny septambra 2008)
Nitsangatsangana tamin’ny fiara, toy ny mahazatra azy ny Mpanjaka, niaraka tamin’ny zanany lahimatoa, ilay Printsy izay handova azy. Nijanona teo amin’ny sampanan-dalana iray teo anoloan’ny polisy iray misahana ny fifamoivoizana izy. Nitodika tamin-janany izy, ary nanontany azy raha toa ka te ho lasa polisy ity farany any aoriana any. Tsy niandry an’ilay zazalahy kely hamaly akory ilay polisy fa tonga dia namaly avy hatrany ary nanambara tamin’ny Mpanjaka fa manantena izy fa hiakatra ny seza fiandrianan’ireo razambeny ilay Printsy tanora mpandova, indray andro any. Nanohy ny fiderany ny Mpanjaka izy. Nankasitraka ny fideran’ilay polisy azy ny Mpanjaka, tahaka ny mahazatra, ary talohan’ny nialany teo dia nomeny fanomezana Grima ilay polisy [patanty fampiasana taksy iray sy ny fanomezan-dalàna ara-panjakana malalaka isankarazany]. Ny Mpanjaka Mohamed VI eto no resahina.
Ho foana ny fanantenan’ny Maraokana amin’ny fanovana na dia hiandry ny fitondran’i Hassan III , ilay Printsy mpandova aza raha marina ireo zavatra noresahan’ny gazety AIJareda AIAoula ireo.
Tsy maintsy manaiky isika fa ity toe-karen’ny fizarana tombontsoa azon’ireo zanakalahy sy zanakavavin'reo mpanankarena ato amin’ity firenena ity, sy ny fanadinoana ny olon-kafa no nandrava ny firenentsika sy nampilatsaka azy eo amin'ny dingana manahirana amin'ny fampilaharana iraisam-pirenena rehetra. Tsy ilaina ny fampiasana ireo teny mavesatr’ireo mpanao politika mba hahatakarana ny dikan’izany. Misy olona sasany misitraka tsy ara-drariny ny zon’ny hafa! Ny patanty hampiasa taksy sy ny anaram-boninahitra izay nozarain’ny Mpanjaka amin’ireo izay mangataka izany amin’ny alalan’ny taratasy, niaraka tamin’ireo teny fampiasan’ireo mpangataka eny amron-dalana dia ao anatin’ity sokajin’ny mahazo tombontsoa ity. Tsy hanova ny vahoakany ho lasa mpangataka mifikitra amin’ny anaram-piandrinana ny firenena manaja ny olom-pireneny. Fa mampiroborobo ny indostria, sy ireo fanazarana asa kosa izy ireo hahafahany miasa sy miaina amim-pahamendrehana. Na dia heverina aza fa tsy izany no zava-mitranga fa zaraina amin’ireo olom-pirenena izay mendrika izany ireo tombontsoa ireo, tahaka ireo mila izany sy ireo mahantra, izay tsy azo tanterahana rahateo ihany koa, dia tsy izany no tokony hampirehareha ireo Maraokana. Voasoratra ao amin’ny Lalampanorenana ny zo hanana asa, fahasalamana, fanabeazana. Noho izany, tokony hanome izany ho an’ireo olom-pirenena ny Fanjakana fa tsy hanala baraka azy ireo amin’izao fomba izao.
Rehefa mahita ny fomba ataon’ny rainy amin’ny fizarana anaram-boninahitra, tombontsoa ary fanomezana ho takalon’ny fankasitrahana sy fiderana ilay Printsy izay ho lasa Mpanjaka indray andro any dia hanao toy izany ihany koa izy rehefa ho tonga eo amin’ny fitondrana. Izany no antony tsy hanantenantsika ny nofinofintsika amin’ny fitoviana sy ny fahafahan’ny olom-pirenena ao Maraoka hatramin’ny fanjakan’i Mohammed VII, izay hisolo an’i Hassan III, ilay Printsy mpandova aorian'ny ankehitriny.
Ho vaovao fanampiny, vakio ny tranonkalanay Global Voices Advocacy sy ny lahatsoratray. Nisy ny fanangonan-tsonia an-tserasera, nangataka ny famotsorana ilay bilaogera. Nisy ihany koa ny vondrona Facebook noforonina.
Sary natolotr'i: Hespress